Liiska Ugu Dambeeya ee 'Jeex Nolosha' Anime Waxaad Ku raaxeysan doontaa Daawashada - Kale
Liiska Ugu Dambeeya ee 'Jeex Nolosha' Anime Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Fiirsato
Ma jiraan wax la mid ah 'jeexitaanka nolosha' anime. Ka dib oo dhan, taasi waa si sax ah waxa aad helayso.
Qeyb ka mid ah jilayaasha ayaa ku nool nolol maalmeed.
Halganka socda, caqabadaha, iyo daqiiqadaha farxada leh.
Iyo feejignaan adag oo ku saabsan jilayaasha qaab nololeedka.
Ama sida qeexitaanka Google u dhigayo:
'Matalaad macquul ah oo waayo-aragnimo maalinle ah oo filim, ciyaar, ama buug ah.'
Waa kuwan liiska qaar ka mid ah bandhigyada ugu fiican mudan in la baaro.
37+ Jeex Nolosha Anime:
Sakura Quest wuxuu ku bilaabmaa Yoshino Koharu. Gabar dhibaato ka haysato ugaarsiga shaqo ee Tokyo, oo aakhirkii shaqo ku hesho tuulo baadiyaha ku taal.
Waxyaabo yar oo muhiim ah oo ka yimid Sakura Quest:
Waxay diiradda saaraysaa safarka iyo dalxiiska (ganacsi ahaan).
Anime-ku wuxuu ku saleysan yahay a nolosha dhabta ah Tuulada Jabbaan, oo loo yaqaan Manoyama.
Ujeedada shirqoolku waa in “Manoyama” nolosha lagu soo celiyo, oo soo jiito dalxiisayaasha tuulada la illaaway.
Waxaa jira ku dhowaad 5 astaamo haween ah. Mid kasta oo leh astaamo iyo shakhsiyad u gaar ah.
Mana jiro adeeg faneed oo aan habboonayn.
Haddii aad rabto inaad tan kula daawatid qof kale adiga mooyee, waad awooddaa. Adeeg fan waa qafiif
Sakura Quest waxay u fiican tahay qof kasta oo xiiseynaya ganacsiga iyo dalxiiska (oo leh majaajilo).
Laakiin Toradora waxaa loogu talagalay qof kasta oo doonaya taxane jacayl ah oo leh dhacdooyin 'qiiro leh'.
Bilowgii waxay ku saabsan tahay Ryuuji iyo Taiga.
Taiga wuxuu si joogto ah ugu xadgudbaa Ryuuji joogsi la'aan.
Laakiin marka aad gasho anime-kan, adoo u maleynaya inaysan kugu qasbeynin inaad hoos u dhigto, dabeecad kastaa waxay bilaabeysaa inay horumariso wax badan, waxaadna baran doontaa wax badan oo ku saabsan jilayaal kasta halganka gudaha iyo sheekooyinka gadaal.
Mar dambe anime wuxuu bilaabmaa inuu helo daran si ka duwan nooc kasta oo nolosha ka mid ah oo aad waligaa arki doontid.
Sababtaas awgeed, Toradora wuxuu caan ku yahay qaybta 'nolosha nolosha'. Waana inaad daawataa.
3. Suuqa Tamako
Waxaa sameeyay Kyoto Animation, Suuqa Tamako waa go aan nolosheeda aan waxba galabsan oo ku saabsan Tamako, gabadh nin ganacsade ah oo Mochi nolol uga dhigta.
Si ka duwan anime sida Sakura Quest, Suuqa Tamako ma laha diirad gaar ah ama qorshe. Marka laga reebo muujinta qaab nololeedka maalinlaha ah ee ku noolaanshaha magaalo yar, ganacsi, shimbir hadal dufan leh, iskuul iyo majaajillo.
Laakiin yaan lagu kadsoomin taas. Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu nasasho anime ayaa muujinaya taas oo adiga ku dejin doonta.
Adiguna sidoo kale uma baahnid inaad aad uga fikirtid waxa aad daawaneysid… Sababtoo ah taas waa la qaboojiyey oo fudud.
Akhriso: 6 Ee Studio-yaddii Ugu Wanaagsanaa
4. Saaxiibka Sixiroolaha
Meesha sida Suuqa Tamako ay ku saabsan tahay magaalo sameysa Mochi, Duulista Duulimaadku waxay ku saabsan tahay saaxirad ku jirta tababarka.
Makoto Kowata u guurto baadiyaha qoyskeeda si ay u hesho 'khibrad shaqsiyadeed' oo iyada u diyaarin doonta mustaqbalka.
In kasta oo aadan arkin 'sixir' animeedkan, marka aad sameynaysid waxaa loo isticmaalaa in lagu khafiifiyo niyadda, ama inaad sharaxdo wax anime ay isku dayayso inay muujiso.
Ha ka sugin majaajillo badan midkaan, laakiin filo inaad dareento qabow iyo dabacsanaan sida anime kale oo awood u lahayn.
Anime sida Toradora wuxuu muujinayaa halganka shucuureed ee jacaylka (ugu dambayntii).
Laakiin muuqaalka liinta niyad jab, isdil, jacayl, dambi iyo xoog sheegasho. Taas ayaa ka dhigaysa mid ka duwan celceliska jeexista noloshaada.
Sida qof kasta oo 'caadi ah' uu jeclaan lahaa, Kakeru Naruse wuxuu dambi ku leeyahay dhimashada hooyadiis. Sababtoo ah maalintii ay dhimatay wuxuu sheegay wax aysan ahayn inuu helo.
Iyo qoomamo ayaa isaga ka baabi'inaysa gudaha.
Tani waa taxane qoto dheer, oo macno leh markaa maskaxda ku hay ka hor intaadan go'aansan inaad daawato. Maaddaama ay ku raaxeysaneyso sababo muuqda awgood.
6. Isku xidhka Kokoro
Markii hore ma aanan aqoon waxa laga sameeyo Kokoro Connect, laakiin sida ay horumarka u samaynayso waxay u bilaabantaa inay ifto oo ubaxdo sida ubaxa Iris.
Kokoro Connect wuxuu ku saabsan yahay 5 arday oo lagu qasbay inay la ciyaaraan 'tijaabo' oo tijaabisa saaxiibtinimadooda, miyir-qabka, shucuurta iyo xiriirka midba midka kale.
Waa fikir-kicis. Marka uma badna anime ma noqon doonto kugu kallifaa inaad ka fikirto noloshaada si uun ama qaab kale.
Waxaa jira xoogaa jacayl ah sidoo kale haddii taasi ay ku qanciso inaad jeceshahay.
Clannad waxaa loo yaqaan 'masterpiece' markay tahay jacaylka iyo jeexitaanka nolosha. Waana ku raacsanahay sidii aan u daawaday.
Xilliga ugu horeeya wuxuu diirada saarayaa Tomoya Okazaki iyo Nagisa Furukawa.
Nagisa waa 'daciif' jir ahaan, waxaana jira sabab qoto dheer oo ku saabsan sababta. Laakiin xilli-ciyaareedka ugu horreeya ee Clannad wuxuu diiradda saarayaa in badan oo lagu raaxeysto, iyadoo xilligaaga “qariibka ah” ee macno leh.
Mar 2 waa halka ay Clannad isku beddesho wax qoto dheer, naxdin leh oo ku shubaya shandado shucuur leh.
Sidaas darteed haddii aad tixgeliso Clannad, hubi inaad daawato labada xilliba si aad u hesho sheekada iyo waayo-aragnimada buuxda.
Waxaa soo saaray Kyoto Animation, Kanon waa waxa aan ugu yeero walaalkii yaraa ee Clannad.
Caadiga ah Animation-ka Kyoto, qaababka, qaabeynta iyo jilayaasha ayaa wadaaga xoog leh iskumid.
Animation-ku waa u fiican yahay waqtigiisa, sheekaduna waa u qalantaa sidoo kale. Laakiin Kanon waxaa hadheeyay guusha Clannad.
Dhankaas, haddii aad rabto wax ka baxsan Clannad oo leh sheeko iyo mawduuc ka duwan, Kanon ayaa ah doorashada ugu fiican.
Waxa jira jeexitaan nololeed oo isbarbardhigaya Clannad sida Kanon oo kale oo mudan in la xuso.
9. Ciyaar Cusub!
Ciyaar Cusub! waa mid ka mid ah jeexyada ugu cusub ee nolosha ee ka jira warshadaha. Dib loo siidaayay 2016.
Aoba Suzukaze waa halyeeyga, riyadeeduna waa inay u shaqeyso shirkad ciyaareysa oo loo abuuro ciyaaro lagu noolaado.
Xilliga 1 iyo 2 wuxuu raacayaa Aoba Suzukaze socdaalkeeda ku aaddan warshadaha ciyaaraha. Oo ay weheliyaan jilayaal kale oo dhammaantood u shaqeeya isla shirkad (ujeedooyin isku mid ah).
Marka waad ku raaxeysan doontaa tan haddii 'ciyaar' ama 'barnaamijyo' ay tahay dano shaqsiyeed.
Tayada Animation waa mid ka mid ah astaamaha ugu adag Game New. Waa dhalaal, midab leh, qurux badan oo indhaha ku fiican.
Waxaa sameeyay Kyoto Animation, Violet Evergarden waa anime taas ogyahay sida loogu sheego sheekooyinka qiirada leh.
Qeyb kasta oo ka mid ah dhacdooyinka ayaa diiradda lagu saaray dabeecadda weyn, Violet, oo shaqadeedu tahay inay ka caawiso dadka inay warqado u qoraan dadka ay jecel yihiin.
Si loo siiyo xiritaanka.
Erayadu ma sharixi karaan inta a farshaxan anime waa.
Xitaa waa loo barbardhigi karaa bandhigyo sida Clannad loogu talagalay sheeko-sheegis shucuur leh.
La xiriira: 9 Xigashooyinka shucuurta ah ee ka imanaya violet Evergarden ee aadan iloobi doonin
Barakamon wuxuu ku saabsan yahay Seishu Handa , wariye yaqaan oo loo diray inuu ku noolaado jasiirad si uu uga shaqeeyo dhaqankiisa xun.
Dhammaan qaybaha 12 waxay diiradda saarayaan horumarka shaqsiyeed ee Seishu Handa, safarkiisa, iyo isbeddelada uu u maro qof ahaan.
Waxaa sidoo kale jira da 'kala duwan oo da' fiican oo ka mid ah jilayaasha waaweyn iyo kuwa taageera ee Barakamon oo aad jeceshahay.
Miss Kobayashi's Dragon Maid waa madadaalo saafi ah, oo leh dhowr daqiiqado diiran oo lagu beddelayo-xawaaraha lamaane kasta oo dhacdooyin ah.
The ugu weyn farqiga u dhexeeya tan iyo jeexitaanka caadiga ah ee nolosha, ma waxaa diiradda lagu saaray 1 dabeecadda aadanaha, iyo dawacooyinka dadka u eg.
Waad filan kartaa ”qaar ka mid ah taageerayaasha halkan ka yimid Lucoa, oo ah dabeecad sida muuqata loo qaabeeyey loogu talagalay adeegaha. Laakiin aad ayey uga yar tahay waxa aad ka filan karto bandhigyada isbarbardhiga ah.
Himouto Umaru Chan waxay ku saabsan tahay walaasheed yar oo dhib badan, Umaru, iyo walaalkeed ka weyn: Taihei Doma.
Umaru waa laba waji, inaad ku noolaato nolol laba-nolol ah si aad ugu noolaato filashooyinka dadka.
Sida Miss Kobayashi's Dragon Maid, Umaru Chan waa u baashaal, majaajillo ayaa kaa qoslin doonta.
Gaar ahaan haddii aad ku jirto ciyaaraha fiidiyowga sida MC uu yahay.
14. Aria Animation-ka
Aria Animation-ka waa nooc animated ah ee duugista a. Sababtoo ah waa nasasho, mararka qaarkood farmaajo, oo aad loo qaboojiyey si ay u noqdaan 'halis'.
Majirto majaajillo badan oo noocan ah anime, laakiin uma baahnid maxaa yeelay waxay isku daraysaa jeexitaanka nolosha sayniska iyo khiyaaliga.
Magaalada ay ku taal anime-ku-yaalna waa laga soo qaatay magaalada Venice, ee dalka Talyaaniga. Iyadoo wax yar laga beddelay si looga dhigo mid gaar ah.
15. Fasalka Elite-ka
Fasalka Elite yahay waxba sida jeegaaga nolosha maalinlaha ah.
Sababta Waxay leedahay dhinac ka mugdi badan inta badan. Waxaad kuheli kartaa tan quruxsan qeybaha ugu horeysa.
Ka dib oo dhan, goobtu waxay ku wareegsan tahay ardayda lagu qasbay tartamid midba midka kale si uu u badbaado oo lacag u helo, iyada oo qayb ka ah nidaamka dugsiga iyo xeerarka adag.
Waa anime horyaal u gaar ah.
16. Jacayl, Chunibyo Iyo Dhalanteed Kale
Chunibyo waa nooca jeexitaanka nolosha taasi waxay kaa dhigeysaa inaad cariiriso, oo kugu qasbi doonto tuur
Ama ugu yaraan taasi waxay ahayd waayo-aragnimadayda… ilaa aan fursad kale ka siiyo oo aan ugu riyaaqay intaba.
Sheekadu waa inta badan ku saabsan Rika, dhalinyaro ah oo aaminsan inay leedahay awoodo awood badan. Iyo Yuta, oo ah jilaa lab ah oo ku dhaca Riyo khiyaanooyinka.
Waxyaabaha ayaa bilaabaya inay helaan wax yar oo jacayl ah xilli ciyaareedkii labaad ee taxanahan.
17. Golaha ardayda ugufiican
Dulucdu dhammaantood waxay ku jirtaa magaca.
Waxay ku saabsan tahay golaha ardayda ugu fiican iyo nolol maalmeedkooda maaraynta iskuulkooda. Diirad saaray inta badan on Rino Rando iyo Kanade Jinguji.
Dabeecad kastaa waa mid xusuus mudan, inkasta oo ay jiraan 8 xaraf. Waxaadna helaysaa isku darka jaceylka, majaajilada nacasnimada ah, iyo dhibic yar oo dhacdooyin wadnaha-diirimaad leh ah si aad dhammaantood iskaga wada dhigtid.
Waxaan jeclahay anime iga qosli kara oo dareen ha iga dhigto jilayaasha.
Hinamatsuri wuxuu bartay farshaxanka wax qabashada labadaba.
Dhinac waxaad ku haysataa Hina, gabar awoodo sarraysa leh (oo la nool Yakuza).
Ka dibna waxaad leedahay Anzu, gabar leh karti aan caadi ahayn… mooyee iyadu waxay ku dambaysaa hoy la’aan.
Waxaad arkeysaa labadan walxood oo ka ciyaara bilow ilaa dhamaad, anime-ka ayaa shaqo fiican ka qabanaya “waqtiga” si sax ah.
Hyouka waxay ku saabsan tahay gabadh si xanaaq badan u adkaysata: Eru Chitanda, iyo nin caajis ah: Houtarou Oreki.
Si wada jir ah (oo leh jilayaal kale) waxay xalliyaan waxyaalaha qarsoon oo waxay ka helaan jawaabo su'aalaha murugsan.
liiska anime loogu magac daray hulu 2017
Ku dhowaad sida baarayaasha.
Waxa ugu yaabka badan ee ku saabsan Hyouka waa sida madadaalo u tahay, inkasta oo dulucdu u muuqato mid caajis iyo isku celcelis ah.
ReLife waa qeyb kamid ah taxanaha nolosha ku saabsan qaan-gaarnimada iyo inaad noloshaada u rogto mid wanaagsan.
Kaizaki Arata nasiib ayuu helayaa waxaana la siiyay fursad uu noloshiisa dhanka kale ugu rogo, isla markaana uu saxo khaladaadkii uu sameeyay isagoo dhalinyaro ah oo ku nool Japan.
Waxa soo socdaa waa majaajillo saafi ah, iyo sheeko macno leh oo la socota dhowr astaamo oo kulliyadda ah.
Mararka qaarkood, wax yar bay 'mugdi' noqotaa sidoo kale.
Ranma waxaa sameeyay isla soosaarayaasha Inuyasha. Marka waa iskuul duug ah heerarka 2018.
Laakiin haddii aad rabto qayb nolosha ka mid ah jeexan nolosha maanta sidaan ognahay, ku bilow Ranma 1/2.
Waa mid ka mid ah kuwa ugu badan asalka ah jeexan noloshu waxay muujineysaa taasi wali quseysa oo mudan in lagula taliyo.
22. Safarada Kino (Iyo Safarkii Kino)
Safarada Kino waa xilli-ciyaareedkii ugu horreeyay (oo keliya) ee taxanaha anime ee Kino.
Waxay bilaabatay horaantii 2000, animation-ku waa cadeyn taas. Laakiin yaan lagaa dhigin.
Ilaa iyo inta sheekadu sheegeyso, Safarka Kino ayaa ugu badan cusboonaysiin anime waan daawaday. Iyo dhinaca u safridda daraasiin waddamo iyo magaalooyin ah waa sabab kale oo gaar ah oo loo tixgeliyo.
Safarka Kino waa anime 'dheeraad ah' oo leh animation casri ah iyo muuqaallo taariikhda ku habboon. Laakiin asalka waa kan ugu fiican version labada.
Anime waa nooc kasta oo la yaab leh, niyad jab leh, iyo siyaabo qaarkood, kor u kacday Waa waxaad ugu yeeri laheyd 'majaajilo madow' oo jeexan nolosha oo ah diiradeeda ugu weyn.
Tomoko Kuroki waa gabar dhallinyar ah ka dib dhammaan iyada oo leh kalsooni hoose, oo aan lahayn saaxiibo, iyo fikrad hoose oo nafteeda ah.
Marka noocyada waxyaabaha ay sameyso si ay u hesho feejignaan, ogaato, iyo “dadaal” waxay si dabiici ah isu badashaa xaalado qariib ah, qalafsan oo kaa qosli doonta.
Haddii kale, waxay kaa dhigeysaa inaad ruxdo.
24. Noloshii musiibada ahayd ee Saiki K
Saiki K waa hab soo kabasho ah in la jaro nolosha maxaa yeelay waxay ku dareysaa cunsur khiyaali ah, quwado waaweyn, iyo halyeeyo hordhac u ah oo u arka in awoodiisa ay tahay wax aan ku habboonayn.
Aragtidiisa, Saiki K kaliya wuxuu rabaa inuu ku noolaado noloshiisa oo uu iska ilaaliyo inuu qofna ku dhibto.
Laakiin sida aad ku arki doontid majaajillada waalan iyo cajaa'ibyada aan kala joogsiga lahayn, tani sida muuqata waa wax aad u badan oo la weydiisto.
Marnaba ma arki doono wax macquul ah jeex nolosha taxane ah inta aan noolahay.
Nana waa tan ugu runta badan 'run nolosha' jacaylka ku jira warshadaha. Waxaa soo saaray Madhouse.
Waxaan kugula talin lahaa DHAMMAAN dhalinyarada qaangaarka ah (iyo Millennials) inay daawadaan. Sababtoo ah waxay indhahaaga u fureysaa adduunyada kugu hareeraysan, hab macquul ah oo fudud oo aad la xiriiri karto.
26. Gabadh dareere ah
Gabdhaha Squid waa gabar ka timid badda iyada oo leh awoodaha iyo awooda xayawaanka. Xitaa sida ay u hadleyso waa wax yar oo qariib ah, la yaab leh, laakiin inta badan oo dhan, qosol badan.
Taasi waa qayb ka mid ah soo jiidashada dilaaga animes.
Iyada oo wadar ahaan 3 xilli, iyo OVA, kani waa dib u dhac, jeexitaan aan daryeel lahayn oo nolosha ah si uu kuugu maaweeliyo.
Gabdhaha Squid aniga ahaan waa la dhayalsaday, malaha maxaa yeelay waxaa loo arkaa inay aad u tahay 'carruur' (wax kasta oo macnaheedu yahay).
Nodame Cantabile wuxuu qaadanayaa celcelis ahaan jaceylkaaga jaceylka , oo ku jajabiya iyada oo aan laga qoomameynin.
Qaado dabeecadda ugu weyn: Chiaki tusaale ahaan.
Waa nin halkii uu dallad ku wareejin lahaa gabadha u jecel, wuu iska tagaa oo naftiisa ayuu u adeegsadaa.
Haddii aad rabto wax aan caadi ahayn oo dhadhan fiican leh, Nodame Cantabile ayaa kaa yaabi kara.
28. Jacaylka Live Dugsiga Idol Mashruuca
Jacaylka Live waa 'gabdho qurxoon oo waxyaalo qurux badan sameeya' jeex taxane nolosha ah. Laakiin gabi ahaanba run maahan.
Qorshaha ugu weyn wuxuu ku saabsan yahay Honoka Kousaka, asxaabteeda, iyo hadafkooda ah inay wada noqdaan sanamyada iskuulka.
Waa mid ka mid ah showgii ugu horreeyay ee 'gabdhaha oo dhan' ee aan daawaday, dabeecad walbana waxay ka dhigeysaa Jaceylka Live inta ugu xiisaha iyo xiisaha badan.
La xiriira: 13 Jacaylka Mashruuca Idol Live School Idol Xigashooyin Xaq u Leh In La Wadaago
29. Xiddig nasiib badan
Xiddigta nasiibku waa kale gabdho taxane anime ah. Laakiin taasi waxba kuma jabna haddii aad maskax furan tahay oo aad rabto majaajilo wanaagsan.
Konata Izumi waa jiifaf, dabeecad jees jees ah oo dhalaalaysa bandhigga. Iyo saaxiibkeed - Kagami waa cagsigeeda.
Filo inaad aragto tixraacyada ciyaaraha, dhaqanka Otaku, MAYA goob, iyo dhacdooyin aan kala sooc lahayn oo kaa dhigi doona inaad la yaabto WTF oo aad xitaa naftaada la sameyneyso.
30. Iskuulka Tooska ah (Gakkou Gurashi)
Gakkou Gurashi, ama Iskuul ku nool Ingiriis, waa taxane naxdin leh oo ku saabsan zombies, cudurka maskaxda, iyo cilmi nafsiga dabeecad kasta.
Dhammaan jilayaasha ugu waaweyn ayaa lagu qasbay inay ku noolaadaan 'hadhaagii' maxaa yeelay adduunku waa dhammaaday. Tan iyo markii ay ku gurguuraneyso Zombies.
Yuki Takeya, mid ka mid ah jilayaasha ugu weyn ayaa ku dhaca cudur maskaxeed dhammaan walbahaarka iyo xaaladaha murugada leh.
Haddii ay tahay wax dhaxan iyo mugdi ah oo aad rabto, tani waa jeexitaanka nolosha anime ee lagu galayo.
Marka ha u oggolaan 'cute' inay ku nacaan.
31. Tanaka Kun Had iyo Jeer Liis Ma Leh
Tanaka waa arday caajis ah oo aad ugu xeel dheer wanaagiisa . Xaqiiqdii wuu aad u qabow yahay, waxaad u maleyneysaa inuu sigaar cabayo oo uu ka baxayo.
Saaxiibkiis Oota waa dabeecad bisil, feker leh oo wax ku ool ah oo Tanaka uu ku tiirsan yahay.
Ma jiro wax badan oo shirqool ah, laakiin ma jiraan u baahan ahaansho. Sababtoo ah waa nooca anime ee aad u daawato jilayaasha, nasashada, iyo majaajillada mararka qaarkood ku jirta horyaal u gaar ah.
32. Aqoonyahan yar oo Witch ah
Aqoonyahan Witch Little waa mid ka mid ah Studio Trigger filimkiisa ugu fiican ee ku jira buugooda.
Halkan ka heli meysid adeege. Ama wax kasta isku dayaa in si dhuumaaleysi ah loogu tuuro adeegaha taageerayaasha dartiis.
Mu’aamaradan ayaa ku saabsan Atsuko Kagari, iyo riyadeeda ah inay noqoto saaxirad dadka ka qoslisiin karta.
Riyadan fudud waxay isu rogtay waalli waalli ah oo xiiso leh, waxbarasho leh oo kaa dhigeysa inaad jeclaan lahayd inaad ku biirto.
Waa nooca anime ee aad jeclaan lahayd inaad ilmo ahaan u daawato, mooyee weligeed ma jirin.
Uma maleyneynin in liistadani ay dhameystirmi laheyd K-On la'aanteed adigu?
K-On waa boqoradda aan muran ka taagnayn qayb ka mid ah nolosha. Taasi waa sida Kyoto Animation u rogo sidii istuudiyaha anime.
Ma jiro wax shirqool ah, sida Lucky Star oo kale, waana qeexitaanka suugaaneed ee 'gabdhaha qurxoon ee sameeya waxyaabo qurxoon'.
Iyo xitaa wali, animation-ka si fiican ayaa loo qabtay, majaajillada waa mid caadi ah, iyo sida qaybo badan oo nolosha ah, way fududahay in la diiriyo maxaa yeelay way fududahay.
Hanayamata waxay ku saabsan tahay Naru Sekiya, oo ah wiil dhalinyaro ah oo xishood badan oo welwel iyo walbahaar ku dhex jira dad badan.
Ugu dambayntii Naru iyo jilayaal kale ayaa is-urursada oo bilaaba inay sameeyaan waxa Japan ugu yeerto Yasakoi.
Kaasoo ah nooca qoob-ka-ciyaarka qoob-ka-ciyaarka
Hanayamata waa mid kale oo ah 'gabdho qurxoon oo waxyaalo qurux badan sameeya', marka laga reebo naqshadaha iyo jilayaasha waa macquul. Halka sida anime sida K-On ay uga sii badan tahay 'carruurta oo kale' sawirada 'Moe' darteed.
Waa mid ka mid ah jeexyada ugu nadiifsan ee nolosha oo leh dheelitirnaan wanaagsan oo ah wax kasta oo aad filan lahayd, adigoon caajisayn ama aad u gujin.
35. Aroosadii Hore ee Magus
Arooskii hore ee Magus Bride waa a qurux badan jeexan nolosha, oo u dhiganta Violet Evergarden tayada animation-keeda.
Waxay ku saabsan tahay Hatori Chise , agoon leh awoodo gaar ah oo loo diiday loona diiday nolosheeda oo dhan “maxay” iyada tahay.
Mawjadda koowaad ee taxanahani waxay ku bilaabmaysaa xoog, laakiin waxay kuxirantahay aragtidaada, qeybta ugu dambeysa xoogaa wey dhacdaa.
Laakiin weli waa mudan tahay in lagugula taliyo
36. Haganai: Ma lihi saaxiibo badan
Haganai qaadataa jeexitaanka caadiga ah ee fikirka nolosha, ka dibna ku daraya xoog sheegashada, kalinimada, iyo Ecchi isku dar ah.
Waa 'Xaram' sidoo kale.
Marka haddii aadan fileynin waxtar fans hadda waad ogtahay waxa laga filan karo.
Haganai waa jeexan nolosha oo ka duwan wax kasta oo aad arki doontid. Sababta oo ah sida ay ula tacaalayso kalinimada iyo xoog sheegashada. Intii ay weli maareynayso tuurista majaajillo iyo jacayl aan xishood lahayn lafteeda.
37. Hadday Tahay Gabadhayda, Xitaa Waxaan Jabin Lahaa Rabbi Jinni!
Hadday Tahay Gabadhayda waa taxane anime ah oo uu soo saaray 2019 by Maho Film (istuudiyaha cusub).
Waa anime lagu dhisay agagaarka xiriirka aabaha iyo gabadha u dhexeeya aadanaha iyo ilmaha jinka ah.
Qayb kasta waxay umuuqataa mid ka farxad badan tan xigta, sheekadana waxay ku dhisantahay soo jiidasho shucuur iyo daqiiqado 'qurux badan' oo adkeynaya in la jeclaado.
Dusha sare - waa a macno leh taxane ah oo soo bandhigi doona wax cusub oo loogu talagalay taageerayaasha Usagi Drop iyo Barakamon.
Teaser xirfad leh Takagi.
Ma maqashay? Waxaan ahay Sakamoto!
Nolol Maalmeedka Wiilasha Dugsiga Sare.
No Non Byori Kucelcelinta.
Maxaa kale oo aad ku dari lahayd oo xusid mudan?
Waa maxay Anime waa inaan daawadaa? Halkan waxaa ah 17 Talooyin
15 Ka Mid Ah Taxanaha Ugu Wanaagsan ee Tartanka Filimaanta ah ee ay tahay inaad Bilawdo Daawashada
waa maxay jeex nolosha anime
top 10 anime muujinaysaa waqtiga oo dhan
anime la mid ah kalgacalka franxx